USuzhou Optimal Machinery Co, Ltd. (OPTFAN), eyasungulwa ngo-2007, idlala indima ephambili embonini yabalandeli be-HVLS (High-Volume, Low-Speed) eChina. Umholi wokuqala kubalandeli be-HVLS, i-OPT yethule isizukulwane sayo sokuqala "abalandeli bezezimboni ze-HVLS" ngo-2007. Bazinikele ekuvuseleleni abalandeli beHVLS abasebenza kahle bendawo enkulu evulekile yokupholisa nokungenisa umoya.
I-OPT inaka kakhulu ikhwalithi, ubungcweti kanye nokuqanjwa kwabalandeli be-HVLS ukuklama imikhiqizo eyingqayizivele enokusebenza okungcono.Abakaze bayeke ucwaningo futhi bathuthuke uma kukhulunywa ngobunjiniyela nokuthuthukiswa komkhiqizo. Iminyaka eyi-13 enikelwe abalandeli be-HVLS kuphela, isebenze ngaphezulu kuka-5000 amakhasimende ezimakethe zasekhaya, ngaphezu kwama-300 awo angamabhizinisi aphezulu emhlabeni wonke angama-500. Emakethe yaphesheya kwezilwandle, i-OPTFAN ithunyelwe eCanada, United States, Mexico, Japan, Australia nakwamanye amazwe angama-30.
Njengamanje, i-OPTFAN ingomunye wabakhiqizi abambalwa abasebenza emkhakheni wabalandeli beHVLS nethimba le-R & D, ezokukhiqiza, ukubonisana kohlelo, ukufakwa, ukuthengisa kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva eyodwa. Ineqembu elinolwazi kakhulu lokuhlinzeka ngesevisi eyodwa.Abalandeli be-OPT bahlala bethatha "ukuphepha njengobuchwepheshe obuyisisekelo, ukufunwa kwamakhasimende kokugxila emisha, inzuzo yamakhasimende njengenhloso, engabizi ekuphishekeleni okukhulu" njengenhloso yokukhonza amakhasimende omhlaba jikelele.
I-OPT izuze okukhiphayo okuningi ngamandla amahhashi amancane ngokususa izindwani zendabuko nokusebenzisa ukwakheka okukhethekile kwe-OPT-Germany Nord motor reducer. Ngokunciphisa inani lamakhasi futhi usebenzisa izinga eliphakeme laseMelika lezindiza i-aluminium alloy kanye nama-airfoils ayingqayizivele aklanyelwe, abalandeli be-OPT bafinyelela ku-50% ngaphezulu kunabanye abalandeli be-HVLS, okuvumela ukunyakaza komoya okwandile, izindleko zokusebenza eziphansi kanye nokonga unyaka wonke. Inkampani enhle igxila emininingwaneni, ilwela ukuphelela ukunikeza amakhasimende izindleko eziphansi kakhulu zobunikazi nokusebenza kahle kakhulu nokuthembeka komkhiqizo nensizakalo.
1. Abalandeli be-KQ Series HVLS Industrial Ceiling (6 blades)
2. Abalandeli be-Navigator Series-PMSM Motor Ceiling
3. Abalandeli beSuperwing Series-PMSM Yezentengiso
4.I-Airwalker Series - Abalandeli be-HVLS yeselula
Ubuchwepheshe obuhle kakhulu buyisisekelo sethu, insizakalo esezingeni eliphakeme ingukuphila kwethu, ukuphepha okuqinisekisiwe kuyisisekelo sethu.
Inkampani yethu inamalungelo obunikazi bokuqamba ama-2, amalungelo obunikazi obukekayo ayisishiyagalombili.
Imikhiqizo Yonke nge-AQSIQ, CQC, i-United Kingdom GLC ne-European CE, isitifiketi sokuhambisana nebhizinisi se-SCS, Izingxenye nge-CE, UL Europe, PSE kanye nezitifiketi ezijwayelekile zase-United States. Inkampani yethu ithole izitifiketi ze-ISO9001: 2008.
Eminyakeni yamuva, kukhethwe ama-optfans: Izitifiketi ze-ISO9001: 2008, i-e-commerce logistics yezobuchwepheshe obuhle kakhulu kanye nebhizinisi lemishini, izinhlangano zezimboni iSuzhou City low-carbon, insizakalo esezingeni Izinga le-Jiangsu i-AAA-level, amabhizinisi aphezulu e-Suzhou namanye ama-honors.
Ngaphansi kwesisekelo sokuthuthuka okuqhubekayo kwemikhiqizo, amabhizinisi amaningi avikela ezemvelo nomoya opholisa umoya asebenza ndawonye ukubhala isahluko esisha ekongeni ugesi.